donor list ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစုမှ ကောက်ခံပေးသော အလှုရှင်များ စာရင်း <!-[if Webkit]> <!-[if Konq]> <!-[if Opera]> <!-[if FF]>
=> dhammadownload အတွက်လှုဒါန်းသော အလှုရှင်များ စာရင်း
=> ဓမ္မာစရိယတက္ကသိုလ်အတွက် လှုဒါန်းသော အလှုရှင်များ စာရင်း
ဓမ္မဒေါင်းလုပ်၏ သာသနာပြန့်ပွားရေး လုပ်ဆောင်မှုများကို သူတော်ကောင်းများသည် တဘက်တလမ်းမှ ကုသိုလ်ပါဝင်ခွင့် ရရန်အတွက်ဤအလှုခံမှု အခန်းကဏ္ဍကို ပြုစုထားပါသည်။
ယ္ခုလို ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစု၏ သာသနာပြန့်ပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အလှုတော်များ ပါဝင် လှုဒါန်းခြင်းကို အလွန်တရာမှ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ရှိပါသည်...
သူတော်ကောင်းများသည် ဓမ္မဒေါင်းလုပ်မိသားစုများနှင့် ထပ်တူထပ်မျှသော်လည်ကောင်း၊ ထိုမျှမက သာလွန်သော ကုသိုလ်ကံ စေတနာ ထူး များ၏ အကျိုးကို သံသရာ အဆက်ဆက် ခံစား စံစား ကြရပါစေ..
နိဗ္ဗာန်၏ ဓါတ်သတ္တိများသည် မိမိတို့ ဉာဏ်အမြင်တွင် လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် မကြာမီ ထင်ရှားပေါ်ပေါက် လာကြပါစေ ..
ဤသို့ပြုအပ်သော အလှုဒါနကို ဓမ္မဒေါင်းလုပ်မိသားစုများမှ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ သာဓု ခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်..
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု...... ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု.......ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု.......
(၁) မြန်မာပြည်မှ ဓမ္မမိတ်ဆွေများသည် အောက်ဖေါ်ပြပါ အကောင့်သို့ ပေးပို့ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဘဏ်အမည်။ AYA bank
အကောင့် အမည်။ ဒေါ်ဆွေဆွေကြိုင်
(၂) စင်္ကပူရှိ ဓမ္မမိတ်ဆွေများသည် အောက်ဖေါ်ပြပါ အကောင့်သို့ ပေးပို့ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဘဏ်အမည်။ DBS Saving Plus
(မှတ်ချက်၊ Internet Banking မှ ငွေလွဲှလျှင် အကြောင်းအရာတွင် donation, dhammadownload, စသော ဝေါဟာရ စကားလုံများ မသုံးကြပါရန်။)
(၃) အပြည်ပြည်ဆိုင်နိုင်ငံအသီးသီးတွင်ရှိကြကုန်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့သည် Paypal အကောင့် (kyawlwin2000@gmail.com ) ထဲသို့ တိုက်ရိုက် send money ဖြင့်လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်။
အလှုငွေ လွှဲပြီးပါက အလှုရှင် စာရင်းပြုစုရန်အတွက် အောက်ပါ form ကို ဖြည့်သွင်းပေးကြပါရန်လည်း မေတ္တာ ရပ်ခံပါသည်...
DBS iBanking မှ အပတ်စဉ် (သို့မဟုတ်) လစဉ် (သို့မဟုတ်) နှစ်စဉ် လှုဒါန်းလိုသူများသည် Fund Transfer to other DBS/POSB နည်းကို မသုံးဘဲ "Standing Instruction" နည်းကို အသုံးပြု၍ လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် အပတ်စဉ်၊လစဉ်၊နှစ်စဉ် ပုံမှန် လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်။ SI နည်းဖြင့် လစဉ်လှုဒါန်းသော အလှုရှင်များသည် မိမိတို့၏ အမည်၊ လှုဒါန်းသော အကြောင်းအရာ "ဓမ္မဒေါင်းလုပ်၏ သာသနာပြန့်ပွားရေးလုပ်ငန်းပွားအတွက်"၊ လှုဒါန်းသော ငွေပမာဏ၊ SI setting တွင် ပါသော နေ့ရက်များ (ဥပမာ- အပါတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ ၃လ တစ်ကြိမ်၊ လွှဲမည့် နေ့စွဲ) စသည်တို့ကို dhammadownload.admin@gmail.com သို့ ပေးပို့ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ DBS တွင် SI သည် ငွေပမာဏသာ ပေါ်ပြီး လွှဲသည့် အလှုရှင်ရဲ့ အမည် မပေါ်သဖြင့် မည်သူ မည်ဝါ လှုဒါန်းလိုက်သလဲဆိုတာ ခွဲခြားရ ခက်ခဲနေပါသဖြင့် email ပေးပို့ပေးကြပါရန်။ ဓမ္မဒေါင်းလုပ်မှ အလှုခံသော Project များ ကွဲပြားနေပါသဖြင့် လက်ခံရရှိသော အလှုငွေကို ဘယ် Project ထဲ ထဲ့ရမလဲဆိုတာလဲ အခက်အခဲ တွေ့တတ်ပါသဖြင့် လှုဒါန်းသော အကြောင်းအရာကိုလဲ ဖေါ်ပြပေးပါရန်။ ထိုနည်းအတူ.. အလှုရှင်အမည်များကို English လို မှ မြန်မာလို ပြန်ရေးရာတွင် အသံထွက်နှင့် စာလုံးပေါင်းလဲ ရံဖန်ရံခါ မှားတတ်ပါသဖြင့် အလှုရှင် အမည် အပြည့်အစုံကို ဖေါ်ပြပေးပါရန်လဲ မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
မှတ်ချက်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ လှုဒါန်းသော အလှုငွေများကို၊ Website hosting အတွက် လစဉ်ကြေး ပေးဆောင်ခြင်း၊ ဒီဗီဒီ တရားအခွေများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဓမ္မ စာအုပ်များ ဝယ်ယူခြင်း၊ NAS Storage များ၊ Scanner များ နှင့် တခြားသော dhammadownload.com ဓမ္မပြန့်ပွားရေးဆိုင်ရာများတွင် အသုံးပြုပါသည်။
အောက်ပါ ငွေလွှဲသော Transaction များသည် အလှုရှင် အမည် နှင့် လှုသောအကြောင်းအရာကို ရှာမတွေ့ပါသဖြင့် စာရင်းတွင် မဖေါ်ပြနိုင်ပါ။ အလှုရှင်များ မိမိတို့၏ အလှုဖြစ်ပါက အမည် နှင့် လှုသောအကြောင်းအရာ၊ ငွေပမာဏနှင့် လှုသောနေ့စွဲကို dhammadownload.admin@gmail.com သို့ email ပို့ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Transaction Date Reference Debit Amount Credit Amount Transaction Ref1 Transaction Ref2 Transaction Ref3
1-Oct-2012 SI 20
24-Sep-2012 ITR5I-BANK kyaw
23-Sep-2012 ATR 100
24-Aug-12 SI 50
10-Jul-12 SI 20
6-May-12 ATR 10
18-Apr-12 ATR 10
17-Apr-12 ATR 20
11-Apr-12 ATR 100
11-Apr-12 ATR 50
10-Apr-12 ATR 600
1-Apr-12 ITR 500 I-BANK Ko Linn
အလင်းတန်းတရားခွေ ဖြန့်ချီရေးမှ DVD တရားခွေ တော်တော်များများကို လှုဒါန်းခဲ့ပါသည်။
၁၁-၉၊ မြေညီထပ်၊ ယုဇနပလာဇာ၊ ဗညားဒလလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊
ဆိုင်ဖုန်း- ၂၀၀၇၄၇ (ext - 1966) အိမ်ဖုန်း - ၂၀၀၇၄၇(ext - 7835) မိုဘိုင်း - ၀၉-၅၀၅၃၂၃၄ ၊ ၀၉-၅၀၅၄၉၉၄
စဉ် ။ အလှုရှင်အမည် လှုဒါန်းသည့် နေ့ လှုဒါန်းငွေ
၇၈၆ ။ ဦးလှအောင်-ဒေါ်ခင်သန်းနွယ် မိသားစု ၂၇-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၇၈၅ ။ Myo Myint Aung, Maw Maw Aung and Shane Bo ၂၅-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၇၈၄ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၅-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၈၃ ။ Wai Phyo (Qatar Country) ၂၀-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆၅
၇၈၂ ။ LAMINTAYAR CO, LTD , MYANMAR ၁၆-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀၀
၇၈၁ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု (လစဉ်အလှူငွေ) September and October) ၁၆-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၇၈၀ ။ ဦးစန်းမြင့် + ဒေါ်စိန်စိန် ၄-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၇၇၉ ။ Mya Teiktin ၃-၁၀-၂၀၁၄ ယူအက်ဒေါ်လာ ၁၀၀
၇၇၈ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၇၇ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၆-၉-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၇၆ ။ ကိုချမ်းမြေ့အောင် ၁၀-၉-၂၀၁၄ ယူအက်ဒေါ်လာ ၁၀၀
၇၇၅ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၃-၉-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၇၄ ။ မင်းပြည့်မိုး (လစဉ် အလှုငွေ) (September and October) ၃-၉-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၇၃ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု (လစဉ်အလှူငွေ) June, July, August ၃၁-၈-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၇၅
၇၇၂ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၃-၈-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၇၁ ။ နှစ်ဖက်သောမိဘများ အားရည်စူး၍ ဦးဝင်းအောင်+ဒေါ်လှခိုင်မြင့်၊သမီးမြင့်မြတ်ခိုင်အောင်၊သားသန့်စင်ခိုင်အောင် ၁၂-၈-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၅၀
၇၇၀ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၄-၈-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၆၉ ။ Soe Thura စိုးသူရ ၃-၈-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၂၀
၇၆၈ ။ ဦးခွန်ထက် + ဒေါ်တဉ္ဇာဘို ( ပိုးဖြူ ) သား မောင်ကောင်းခန့်ခွန် မိသားစု ၃၀-၇-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀၀
၇၆၇ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၅-၇-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၆၆ ။ wei phyo ၂၁-၇-၂၀၁၄ ယူအက်ဒေါ်လာ ၃၃
၇၆၅ ။ သူသူ ၂၀-၇-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅
၇၆၄ ။ Win Htein မှ မွေးနေ့ အလှူ ၂၀-၇-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀၀
၇၆၃ ။ Khin Mg Win & Nan Zin May Htun (Family) ၁၆-၇-၂၀၁၄ ယူအက်ဒေါ်လာ ၁၀
၇၆၂ ။ su thet mon(Austria) donation for her mother (daw yi yi lwin) birthday ၁၆-၇-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၇၆၁ ။ မင်းပြည့်မိုး (လစဉ် အလှုငွေ) May and June ၆-၇-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၆၀ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၇-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၅၉ ။ အလှူရှင်တဦး ၁-၇-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၅၈ ။ Aung Thwin Min & Swe Lin Mu ၂၉-၆-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀
၇၅၇ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၅-၆-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၅၆ ။ In Memo of Mg Zin Ko Ko donated by remaining family ၂၃-၆-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၇၅၅ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) for Apr, May & Jun ၂၀-၆-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၇၅၄ ။ Ma Ni Ni San ၂-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၇၅၃ ။ မနီလာထက်ထက်အောင် ၂-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၅၂ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၅၁ ။ ကိုရဲမင်းသန့်+မနှင်းနှင်းဝင့်၊ သား မင်းဟိန်းခန့် မိသားစု ၁-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၅၀ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၅-၅-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၄၉ ။ For memory of my father , Koko Gyi From myamyagyi ၂၅-၅-၂၀၁၄ ပေါင်စတာလင် ၁၀
၇၄၈ ။ Myint Thu ၁၄-၅-၂၀၁၄ ယူအက်ဒေါ်လာ ၁၀၀
၇၄၇ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု (လစဉ်အလှူငွေ) April, May ၉-၅-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၇၄၆ ။ Kyaw Thu ,Naing Aye Theint and son Htun kyaw lynn (လစဉ် အလှုငွေ) ၁၃-၅-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅
၇၄၅ ။ Kyaw Thu (လစဉ် အလှုငွေ) ၁၃-၅-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅
၇၄၄ ။ ကိုနေဝင်းနိုင် + မသွဲ့သွဲ့အောင်၊ (သား) စည်သူနေဝင်း Caesar John၊ (သမီး) ယွန်းနေဝင်း Sydney John ၁၃-၅-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၂၂
၇၄၃ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၅-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၄၂ ။ မင်းပြည့်မိုး (လစဉ် အလှုငွေ) (September and October) ၁-၅-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၄၁ ။ မနီလာထက်ထက်အောင် ၁-၅-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၇၄၀ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၇-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၃၉ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၁၄-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၃၈ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၁၀-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၇၃၇ ။ မိဘနှစ်ပါးအမှူးထား၍ သမီးမဟန်နီကျော် ၉-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၇၃၆ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၈-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၇၃၅ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု (လစဉ်အလှူငွေ) ၈-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅
၇၃၄ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၅-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၃၃ ။ မင်းပြည့်မိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၅-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၃၂ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၄-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၃၁ ။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်+ဒေါ်သန်းစီ (လစဉ်) ၃-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၇၃၀ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၂၉ ။ Tin Moe Hlaing (လစဉ်အလှုငွေ) ၁-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၂၈ ။ Nay Myo Tun + Thein Thein Lin (SON) Nyan Lin Tun (လစဉ်အလှုငွေ) ၁-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၂၇ ။ Si Thu Win ( စည်သူဝင်း ) (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၂၆ ။ မနီလာထက်ထက်အောင် ၁-၄-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၇၂၅ ။ သူရ (Thu Ra) (လစဉ်အလှုငွေ) ၃၁-၃-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၂၄ ။ Ko Kyaw Zaw Linn and Ma Yu Thinn Cho ၃၀-၃-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၇၂၃ ။ NYI NYI THAN ၂၇-၃-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၇၂၂ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၆-၃-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၂၁ ။ ဦးကဝိသာရ ၂၂-၃-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၇၂၀ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၁၂-၃-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၇၁၉ ။ ဦးထွန်းနောင်+ဒေါ်ခင်လေးရွှေ မိသားစု ၂၉-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃
၇၁၈ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၇-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၇၁၇ ။ ကိုနေဝင်းမြင့် + မနိုင့်အေးပြည့်ဦး ၁၉-၂-၂၀၁၄ ပေါင်စတာလင် ၂၀
၇၁၆ ။ Ko Kyaw Zaw Linn and Ma Yu Thinn Cho ၁၉-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၇၁၅ ။ ကွယ်လွန်သူ ဦးမျိုးဝင်း အားရည်စူး၍ ဒေါ်လီလီဝင်း နှင့် မောင်နှမများ နှင့် မိသားစု ၁၈-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅၂
၇၁၄ ။ Mr. & Mrs. Joel & Ann Miller Family မိသားစု ၁၈-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၂၆
၇၁၃ ။ ကိုနေထွန်းနိုင်+မနန်းထက်ပွင့်ဝေ ၁၂-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၇၁၂ ။ Ko Kyaw Zaw Linn and Ma Yu Thinn Cho ၈-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၇၁၁ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၄-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၇၁၀ ။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်+ဒေါ်သန်းစီ (လစဉ်) ၃-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၇၀၉ ။ Tin Moe Hlaing (လစဉ်အလှုငွေ) ၃-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၀၈ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၃-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၀၇ ။ Nay Myo Tun + Thein Thein Lin (SON) Nyan Lin Tun (လစဉ်အလှုငွေ) ၃-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၇၀၆ ။ Si Thu Win ( စည်သူဝင်း ) (လစဉ် အလှုငွေ) ၃-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၀၅ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၇၀၄ ။ မစုသက်မွန်၊ su thet mon (Australia) ၃၁-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆၅
၇၀၃ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု (လစဉ်အလှူငွေ) ၂၉-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅
၇၀၂ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၅-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၇၀၁ ။ ကိုတင်မျိုးအောင်+မယုငယ် သားဟိန်းထက်အောငိ မိသားစု ၂၅-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ 365
၇၀၀ ။ ကိုကြည်သူ, မယဉ်မင်းလတ်, (သမီး) သီရိ + (သား) သူရိန် မိသားစု (from Jan to Dec 2014) (လစဉ် အလှုငွေ) ၂၁-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၂၀
၆၉၉ ။ နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုကြည်စိုး+ မမိုးအိအိစိုး မိသားစု ( Jan + Feb လ) ၂၁-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၆၉၈ ။ နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုမြတ်မင်း + Ma Jamie Jian (USA) မိသားစု ၂၁-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၆၉၇ ။ နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုမြတ်မင်း + Ma Jamie Jian (USA) မိသားစု ၁၉-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၆၉၆ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၁၃-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၆၉၅ ။ နှစ်ဘက်သောမိဘများအားအမှုးထား၍ ဦးမော်စီလွင် + ဒေါ်မူယာခင်၊ သမီး ယမုံနာခင်၊ ထက်အဏ္ဏဝါခင် မိသားစု ၁၁-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀၀
၆၉၄ ။ ဦးသန်းနိုင် + ဒေါ်ဥမ္မာအောင် သား ဘုန်းမြတ်ကျော် ၇-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅
၆၉၃ ။ ဆရာကိုကေသာဦး (Malaysia KL) ၆-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၆၉၂ ။ နှစ်ဘက်သောမိဘများအားအမှုးထား၍ မောင်ဝင်းထက်ကိုကို + မယဉ်မင်းမြတ် တို့၏ လက်ထက် မင်္ဂလာဦး အလှူတော် ၅-၁-၂၀၁၄ ယူအက်ဒေါ်လာ ၁၀၀
၆၉၁ ။ Yu Thinn Cho ၅-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၆၉၀ ။ ကိုမြင့်သူ (USA) ၄-၁-၂၀၁၄ ယူအက်ဒေါ်လာ ၁၀၀
၆၈၉ ။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်+ဒေါ်သန်းစီ (လစဉ်) ၂-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၆၈၈ ။ Tin Moe Hlaing (လစဉ်အလှုငွေ) ၂-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၆၈၇ ။ Nay Myo Tun + Thein Thein Lin (SON) Nyan Lin Tun (လစဉ်အလှုငွေ) ၂-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၆၈၆ ။ Si Thu Win ( စည်သူဝင်း ) (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၈၅ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၂-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၆၈၄ ။ ကိုသန်းကြွယ် (USA) ၂-၁-၂၀၁၄ ယူအက်ဒေါ်လာ ၃၈
၆၈၃ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၁-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၆၈၂ ။ ဇာနီရဲဟိန်း၊ အေးနန္ဒာမောင် Zar Ni Ye' Hein & Aye Nanda Maung ၁-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၄၀
၆၈၁ ။ မနီလာထက်ထက်အောင် ၁-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၈၀ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၆၇၉ ။ မင်းပြည့်မိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၆၇၈ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု (လစဉ်အလှူငွေ) ၃၁-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅
၆၇၇ ။ ကိုကျော်စွာလင်း၊ မကေခိုင် တို့၏မင်္ဂလာ ၈နှစ်မြောက်အမှတ်တရအလှူ ၂၉-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၆၇၆ ။ ကိုရဲမင်းသန့်+မနှင်းနှင်းဝင့်၊ သား မင်းဟိန်းခန့် မိသားစု ၂၉-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၆၇၅ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၆-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၆၇၄ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၂-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၆၇၃ ။ ကိုမြတ်မင်းနောင် + မအိအိဖြူ မိသားစု ၂၀-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၆၇၂ ။ Kyaw Myat Oo ၁၈-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၆၇၁ ။ U Kan Nyunt + Daw Saing Family ၁၆-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၆၇၀ ။ U Hla Wai + Daw Aye Aye Family ၁၆-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၂၆
၆၆၉ ။ မစိုးမေသူလွင် ၁၂-၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၆၆၈ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် Oct+Nov+Dec အလှုငွေ) ၉-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၆၆၇ ။ Daw Khin Khin Win & Daughter Ma Kyi Kyi Swe ၉-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀၀
၆၆၆ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု (လစဉ်အလှူငွေ) ၈-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅
၆၆၅ ။ Kyaw Myo Hlaing and Yu Yu San ၈-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၆၆၄ ။ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးစိုးမြင့် အားရည်စူး၍ မိခင်ကြီး ဒေါ်စုရင်(ပုသိမ်) နှင့် သား ကိုကြည်စိုး+ မမိုးအိအိစိုး မိသားစု ၇-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၆၆၃ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၆-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၆၆၂ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၄-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၆၆၁ ။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်+ဒေါ်သန်းစီ (လစဉ်) ၂-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၆၆၀ ။ Tin Moe Hlaing (လစဉ်အလှုငွေ) ၂-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၆၅၉ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၆၅၈ ။ Si Thu Win ( စည်သူဝင်း ) (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၅၇ ။ မနီလာထက်ထက်အောင် ၂-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၅၆ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၅၅ ။ Nay Myo Tun + Thein Thein Lin (SON) Nyan Lin Tun (လစဉ်အလှုငွေ) ၁-၁၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၆၅၄ ။ Kyaw Thiha Aung + Myat Myat Mon
Son: Hein Htet Zay
Daughter: Shwe Yee Lin Latt Cho ၂၉-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅
၆၅၃ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၈-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၆၅၂ ။ Ko Kyaw Zaw Linn and Ma Yu Thinn Cho ၂၅-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၆၅၁ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၃-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၆၅၀ ။ မောင်ထက်ကိုကို + မချိုနွယ်စုလှိုင် မိသားစု ၁၉-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၄၉ ။ Ko Kaung Myat + Ma Hlaing Lay Khing (U.S.A)
For Six Months (Nov'2013 to April'2014) ၁၈-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆၇
၆၄၈ ။ ကိုသန့်ဇော် ၊ မသိန်းသိန်းမော် (သား) မောင်လွင်သန့်မောင် (သမီး) မနှင်းသန့်သော်တာ ၁၇-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀
၆၄၇ ။ Nan Si Kham Maung and Family ၁၄-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၆၄၆ ။ မနီလာထက်ထက်အောင် ၆-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၄၅ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၅-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၆၄၄ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၄-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၆၄၃ ။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်+ဒေါ်သန်းစီ (လစဉ်) ၄-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၆၄၂ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၃-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၄၁ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု (လစဉ်အလှူငွေ) ၃-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 25
၆၄၀ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၂-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၆၃၉ ။ Hain Htet Aung + Win Mar Tun ၂-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၆၃၈ ။ Si Thu Win ( စည်သူဝင်း ) (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၃၇ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၃၆ ။ Tin Moe Haling (လစဉ်) ၁-၁၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၃၅ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၈-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၆၃၄ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၆-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၆၃၃ ။ ကိုနေလင်းထွန်းအောင်+မတင်လေးနွယ်၊ သမီး ခိုင်နေနွယ် ၁၈-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 120
၆၃၂ ။ Dr.Nyo Nyo Min ၁၅-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၆၃၁ ။ ဒေါက်တာသန်းဝင်း + ဒေါက်တာအေးအေးမွန် ၊ သမီး မြတ်သင်း ကြူ ကြူ မိသားစု ၁၄-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၆၃၀ ။ နှစ်ဖက်သောမိဘများကို အမှူးထား၍
KO MYO MIN AUNG + MA OHNMAR TUN ၁၀-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၆၂၉ ။ ဦးထွန်းနောင်+ဒေါ်ခင်လေးရွှေ မိသားစု ၉-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅
၆၂၈ ။ ဦးထွန်းနောင်+ဒေါ်ခင်လေးရွှေ မိသားစု ၉-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅
၆၂၇ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၇-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၆၂၆ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု (လစဉ်အလှူငွေ) ၆-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 25
၆၂၅ ။ မိဘ နှစ်ပါးအား အမှူးထား၍ မနှင်းနုဝေ၏ မွေးနေ့အလှူ ၅-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၆၂၄ ။ မောင်ထက်ကိုကို + မချိုနွယ်စုလှိုင် မိသားစု ၅-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၂၃ ။ Ei Thiri Khaing ၄-၁၀-၂၀၁၃ အော်ဇီဒေါ်လာ 50
၆၂၂ ။ မနီလာထက်ထက်အောင် ၄-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၂၁ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၃-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၆၂၀ ။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်+ဒေါ်သန်းစီ (လစဉ်) ၂-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၆၁၉ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၁၈ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၁-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၆၁၇ ။ Si Thu Win ( စည်သူဝင်း ) (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၁၆ ။ Tin Moe Haling (လစဉ်) ၁-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၁၅ ။ ဝတ်ရည်ထွန်းဇော် ၁-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၆၁၄ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၁၀-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၁၃ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၈-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၆၁၂ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၅-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၆၁၁ ။ Mya Thida Thein ၂၂-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 200
၆၁၀ ။ Ko Than Htike Aung+ Ma Nilar Hla Family ၁၈-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၆၀၉ ။ Nan Si Kham Maung and Family ၁၅-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၆၀၈ ။ Mg Aung,Dubai ၁၅-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၆၀၇ ။ Ko Thein Soe + Nang Phyu Phyu Khaing ၁၅-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 25
၆၀၆ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၁၀-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၆၀၅ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု (လစဉ်အလှူငွေ) ၈-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 25
၆၀၄ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၇-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၆၀၃ ။ ဖခင်ကြီးဦးအေးသိန်းအားရည်စူး ပြီး ကျန်ရစ်သူ ဒေါ်ဝင်းကြည်မိသားစု မှ လစဉ်အလှူငွေ(သြဂုတ်လ. နှင့် စက်တင်ဘာလ) ၄-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၆၀၂ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၃-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၆၀၂ ။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်+ဒေါ်သန်းစီ (လစဉ်) ၂-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၆၀၀ ။ Tin Moe Haling (လစဉ်) ၂-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၉၉ ။ Si Thu Win ( စည်သူဝင်း ) (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၉၈ ။ မနီလာထက်ထက်အောင် ၂-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၉၇ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၉၆ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၁-၉-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၅၉၅ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၈-၈-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၉၄ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၄-၈-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၉၃ ။ မညိုညိုသိန်း (မွေးနေ့အလှု) ၆-၈-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၉၂ ။ ကိုရဲမင်းသန့်+မနှင်းနှင်းဝင့် မိသားစု ၃-၈-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၉၁ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု (လစဉ်အလှူငွေ) ၃-၈-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၉၀ ။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်+ဒေါ်သန်းစီ (လစဉ်) ၂-၈-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၅၈၉ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၈-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၈၈ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၂-၈-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၈၇ ။ မနီလာထက်ထက်အောင် ၂-၈-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၈၆ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၁-၈-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၅၈၅ ။ Tin Moe Haling (လစဉ်) ၁-၈-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၈၄ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၈-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၈၃ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၉-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၈၂ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၂၈-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၈၁ ။ hla soe oo, kyaw san win, myo zaw oo ၂၈-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၅၈၀ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၅-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၇၉ ။ Than Zaw Oo and family ၂၄-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၇၈ ။ U Tin Moe Lwin & Daw Yu Yu Nwe Family ၂၂-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၇၇ ။ Myat Ko Ko & Tin Tin Moe ၂၁-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၅၇၆ ။ ကိုနိုင်နိုင်+မရင်ရင်ဋ္ဌေး (လစဉ် ၁၀နှုန်းဖြင့် ၁၂ လစာ အလှုငွေ) ၉-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 120
၅၇၅ ။ မောင်ကျော်ဇင်ဦး နှင့် မဝင့်ကြည်ဖြူ ၉-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၇၄ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု
(Dhammdownload NAS storage အတွက် လစဉ်) ၃-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 25
၅၇၃ ။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်+ဒေါ်သန်းစီ (လစဉ်) ၂-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၅၇၂ ။ နှစ်ဖက်သောမိဘများကို အမှူးထား၍ မောင်ထက်ကိုကို နှင့် မချိုနွယ်စုလှိုင် မှ လစဉ်အလှူငွေ (ဧပြီ . မေ. ဇွန် . ဇူလိုင်) ၂-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 40
၅၇၁ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၂-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၇၀ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၁-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၅၆၉ ။ Si Thu Win ( စည်သူဝင်း ) (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၆၈ ။ Tin Moe Haling (လစဉ်) ၁-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၆၇ ။ မနီလာထက်ထက်အောင် ၁-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၆၆ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၆၅ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၆၄ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၆၃ ။ Ye May Aung ၁-၇-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၆၂ ။ မယုယုစန်း ၃၀-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၆၁ ။ Kyaw Myo Hlaing ၃၀-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၆၀ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၈-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၅၉ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၆-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၅၈ ။ Ma Aye Aye Mon ၂၅-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 127.46
၅၅၇ ။ Aung Naing Oo and Thi Thi Aye ၉-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 200
၅၅၆ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် ၇-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၅၅ ။ ဦးစံအေး+ဒေါ်အိုကေစိန် မိသားစု ၇-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၅၄ ။ Liu Ching Shu and Htoo Htoo Myint Soe ၆-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၅၃ ။ Ei Myat Khaing ၃-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၅၂ ။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်+ဒေါ်သန်းစီ (လစဉ်) ၃-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၅၅၁ ။ ဦးခင်မောင် ထွန်း + ဒေါ ၤခင်ဆွေဦး (လစဉ် အလှုငွေ) ၃-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၅၅၀ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၄၉ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၄၈ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၂-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၄၇ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၄၆ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၁-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
၅၄၅ ။ Si Thu Win ( စည်သူဝင်း ) (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၄၄ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု
(Dhammdownload NAS storage အတွက် လစဉ်) ၁-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၄၃ ။ Tin Moe Haling (လစဉ်) ၁-၆-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၄၂ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၈-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၄၁ ။ ဒေါက်တာဖြူဖြူအောင် ၂၇-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၅၄၀ ။ ဒေါက်တာဝါဝါအောင် ၂၇-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၅၃၉ ။ ခိုင်စိုးအေး ၁၇-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၅၃၈ ။ Kyaw Soe Han+Thiri Po+Yamonna ၁၇-၅-၂၀၁၃ အော်ဇီဒေါ်လာ 50
၅၃၇ ။ Thaw + Hay Mar ၁၁-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၃၆ ။ မမြတ်ယဉ်ငြိမ်း ၁၀-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၃၅ ။ ဦးစံအေး+ဒေါ်အိုကေစိန် မိသားစု ၇-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၃၄ ။ ကိုလှစိုးဦး /ကိုကျော်ဆန်းဝင်း ၄-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၅၃၃ ။ Liu Ching Shu and Htoo Htoo Myint Soe ၄-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၃၂ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၃-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၃၁ ။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်+ဒေါ်သန်းစီ (လစဉ်) ၂-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၅၃၀ ။ Si Thu Win ( စည်သူဝင်း ) (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၂၉ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၂၈ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု
(Dhammdownload NAS storage အတွက် လစဉ်) ၂-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 25
၅၂၇ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၂၆ ။ မသီတာသိန်း (မွေးနေ့အလှု) ၁-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၂၅ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၁-၅-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၂၄ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၉-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၂၃ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၂၉-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၂၂ ။ ကိုရဲမင်းသန့်+မနှင်းနှင်းဝင့် မိသားစု ၂၈-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၂၁ ။ ကိုတင်ထက်အောင်+မဝါဝါမွန် မိသားစု (လစဉ်) ၂၇-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၅၂၀ ။ Tippang Chan (Boston USA) ၂၆-၄-၂၀၁၃ ယူအက်ဒေါ်လာ 50
၅၁၉ ။ မကေသွယ်စိုး ၂၆-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၅၁၈ ။ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်+ဒေါ်သန်းစီ (လစဉ် ၅၀နှုန်းဖြင့် Jan+Feb+March+Aprl ၄လစာ) ၂၀-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 200
၅၁၇ ။ မယုမွန်အောင် ၁၇-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၁၆ ။ မအိမွန်အောင် ၁၆-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၅၁၅ ။ ဒေါ်ဝင်းကြည် နှင့် ဒေါ်အုန်းမြင့် (၁၁.၄.၂၀၁၃) မွေးနေ့အလှူ အတွက် ၁၁-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၅၁၄ ။ နှစ်ဖက်မိဘအမှူးထား၍ ကိုတေဇာအောင်+မဇွန်ဆုနန္ဒာနိုင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၁၀-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၁၃ ။ မသုစန္ဒာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) ( December,Jan,Feb,March,April) ၉-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၁၂ ။ ဦးစံအေး+ဒေါ်အိုကေစိန် မိသားစု ၇-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၁၁ ။ ဦးကျော်ဝင်း+ဒေါ်မိသန့်သန့်ခိုင် မိသာစု ၅-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၁၀ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၄-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၅၀၉ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု
(Dhammdownload NAS storage အတွက် လစဉ်) ၁-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 25
၅၀၈ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၀၇ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၁-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၀၆ ။ Si Thu Win ( စည်သူဝင်း ) (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၄-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၀၅ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၃၁-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၅၀၄ ။ ဦးထွန်းနောင်+ဒေါ်ခင်လေးရွှေ မိသားစု ၂၉-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃
၅၀၃ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၈-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၅၀၂ ။ မနှင်းအေးမိုး ၂၇-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၅၀၁ ။ ကိုတင်ထက်အောင်+မဝါဝါမွန် မိသားစု (လစဉ်) ၂၇-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၅၀၀ ။ ဦးထွန်းနောင်+ဒေါ်ခင်လေးရွှေ မိသားစု ၂၀-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁
၄၉၉ ။ ကိုသိန်းထွန်းအောင် ၁၁-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၄၉၈ ။ ဦးအောင် ၁၀-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 9
၄၉၆ ။ ဦးထွန်းနောင်+ဒေါ်ခင်လေးရွှေ မိသားစု ၇-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃
၄၉၅ ။ ဦးစံအေး+ဒေါ်အိုကေစိန် မိသားစု ၇-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၉၄ ။ ဒေါက်တာ ပိုင်စိုး + ဒေါ်ခင်မာဆွေ မိသားစု ၅-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 200
၄၉၃ ။ ကိုကျော်ဝင်း+မမိသန့်ခိုင် မိသားစု ၅-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၉၂ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၅-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၄၉၁ ။ ချိုနွယ်စုလှိုင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၄-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၉၀ ။ ကိုနေလင်း + မတိုးတိုးလွင်၊ သမီးလေးသုသု မိသားစု ၄-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၈၉ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၃-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၈၈ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု
(Dhammdownload NAS storage အတွက် လစဉ်) ၂-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 25
၄၈၇ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၁-၃-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၈၆ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၈-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၈၅ ။ ဦးအောင်ကျော်စိုး+ဒေါ်မြယုခိုင် မိသားစု ၂၈-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၄၈၄ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၂၈-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၈၃ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၂၈-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၈၂ ။ ဦးညွန့်အောင် မိသားစု ၂၇-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၄၈၁ ။ ကိုဆန်းဝင်း + မေသက်ဗိုလ် - သမီး သန့်သော်တာဝင်း၊ သွန်းရတီဝင်း မိသားစု ၂၆-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 150
၄၈၀ ။ ဒေါ်ညွန့်တင် (NewYork) ၂၆-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 125
၄၇၉ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၅-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၇၈ ။ မတင့်တင့်ခိုင် ၁၉-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၄၇၇ ။ ကိုကျော်ဝင်း+မမိသန့်ခိုင် မိသားစု ၁၈-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၇၆ ။ Shun La Pyae Moe (ရွှန်းလပြည့်မိုး) - ၁၄နှစ်မြောက် မွေးနေ့မင်္ဂလာ ၁၇-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၄၇၅ ။ ကိုသန်းကြွယ် (USA) ၁၆-၂-၂၀၁၃ ယူအက်ဒေါ်လာ 20
၄၇၄ ။ ကိုဆန်းဦး+မညွန့်ညွန့်ဝေ မိသားစု ၁၆-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 200
၄၇၃ ။ ကိုဆန်းဦး+မညွန့်ညွန့်ဝေ မိသားစု ၁၆-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 200
၄၇၂ ။ ဦးမောင်မောင်လွင်+ဒေါ်မိုးမြင့်စံ ၁၆-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၄၇၁ ။ မသွယ်သွယ်စိုး ၈-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၄၇၀ ။ ကိုထင်လင်းကို+မခင်စန္ဒာမော်၊ သားရွှေဘုန်းမော် မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၈-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၄၆၉ ။ ဦးစံအေး+ဒေါ်အိုကေစိန် မိသားစု ၇-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၆၈ ။ မင်းပြည့်မိုး ၃-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၄၆၇ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၁-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၄၆၆ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၁-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၆၅ ။ မနီနီစန်း ၁-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၄၆၄ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၆၃ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု
(Dhammdownload NAS storage အတွက် လစဉ်) ၁-၂-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 25
၄၆၂ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၃၁-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၆၁ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၃၁-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၆၀ ။ ချိုနွယ်စုလှိုင် (မွေးနေ့+ လစဉ် အလှုငွေ) ၃၀-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၄၅၉ ။ ကိုဇော်ဇော်အောင် ၂၉-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၄၅၈ ။ ကိုမင်းထွဋ်အောင် + မနှင်းဝေအောင် ၂၉-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၄၅၇ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၈-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၅၆ ။ ကိုမိုးမြင့်မောင်မောင် + မဝင်းမဉ္ဇူဟန် (မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်) ၂၈-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 150
၄၅၅ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၄-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၅၄ ။ မစုမွန်သစ် (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၄-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၄၅၃ ။ ပုံ့ပုံ့ (လစဉ် အလှုငွေ) ၂၃-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၅၂ ။ ကိုရဲမင်းသန့်+မနှင်းနှင်းဝင့် မိသားစု ၂၃-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၅၁ ။ စင်္ကာပူသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်ဦးလွင် နှင့် မိသားစု ၁၉-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 500
၄၅၀ ။ ကိုမြတ်ထွန်းမျိုး (လစဉ်အလှု) ၁၇-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၄၉ ။ မစောယုနွယ်(တောင်ကြီး) ၁၂-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၄၈ ။ ကိုလှဆောင်+မဇင်မာ၊ ဖူး ၁၁-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၄၄၇ ။ မစိုးစိုးရီ ၁၁-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၄၄၆ ။ ဦးထွန်းနောင်+ဒေါ်ခင်လေးရွှေ မိသားစု ၈-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 5
၄၄၅ ။ ဦးစံအေး+ဒေါ်အိုကေစိန် မိသားစု ၇-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၄၄ ။ ဦးထွန်းနောင်+ဒေါ်ခင်လေးရွှေ မိသားစု ၃-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 3
၄၄၃ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု
(Dhammdownload NAS storage အတွက် လစဉ်) ၃-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 25
၄၄၂ ။ ကိုလှမျိုးကျော်+မခိုင်လှဝင်း မိသားစု ၃-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၄၄၁ ။ ကိုကြည်သူ + မယဉ်မင်းလတ် မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၄၀ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၁-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၃၉ ။ ချိုနွယ်စုလှိုင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၃၈ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၃၇ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၃၆ ။ ကိုမင်းသူ ( www.flashmo.com ) ၁-၁-၂၀၁၃ ယူအက်ဒေါ်လာ 400
၄၃၅ ။ Sai Noom and family (USA) ၁-၁-၂၀၁၃ ယူအက်ဒေါ်လာ 30
၄၃၄ ။ ဇော်နန္ဒ ၁-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၃၃ ။ မနီလာထက်ထက်အောင် ၁-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၃၂ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၁-၁-၂၀၁၃ စင်ကာပူဒေါ်လာ 50
၄၃၁ ။ ဦးထွန်းနောင်+ဒေါ်ခင်လေးရွှေ မိသားစု ၃၁-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 2
၄၃၀ ။ Noble Moe (for my MUM's Birthday) ၃၁-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၄၂၉ ။ ကိုမင်းထွဋ်အောင် + မနှင်းဝေအောင် ၃၀-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၄၂၈ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် ၃၁-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၂၇ ။ မခိုင်စန်း (လစဉ် from 28 Nov 2012 to 25 Dec 2013 ) ၂၈-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၂၆ ။ ကိုဇာနီအောင် ၂၆-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၄၂၅ ။ ကိုကျော်သူရ ၂၆-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 25
၄၂၄ ။ မစုမွန်သစ် (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၄-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀
၄၂၃ ။ ကိုအောင်သူ+မမျိုးအိအိခိုင် ၂၄-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 9.16
၄၂၂ ။ ကိုကြည်မျိုးသန်း+မသီတာထွန်း မိသားစု (လစဉ်အလှုငွေ) ၂၄-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၂၁ ။ ပုံ့ပုံ့ (လစဉ် အလှုငွေ) ၂၄-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၂၀ ။ ဦးထွန်းနောင်+ဒေါ်ခင်လေးရွှေ မိသားစု ၂၀-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 3
၄၁၉ ။ ကိုမြတ်ထွန်းမျိုး (လစဉ်အလှု) ၁၇-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၁၈ ။ ဒေါ်ဝေဝေခိုင် ( မြစိမ်းတောင်ရိပ်သာ သံဃာဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးအလှူတော်) ၁၇-၁၂-၂၀၁၂ ယူအက်ဒေါ်လာ 30
၄၁၇ ။ ကိုသန်းကြွယ် (USA) ၉-၁၂-၂၀၁၂ ယူအက်ဒေါ်လာ ၁၈.၉၂
၄၁၆ ။ ဦးစံအေး+ဒေါ်အိုကေစိန် မိသားစု ၇-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၁၅ ။ မစန်းစန်းမော်၊ မလွင်မာအောင် ၇-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၁၄ ။ ကိုကျော်သူ (လစဉ် အလှုငွေ) ၆-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၁၃ ။ ဦးမောင်ညွန့် + ဒေါ်မေကျင်ကျင် ၅-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 200
၄၁၂ ။ ဦးအုန်းမြင့် မိသားစု ၅-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၄၁၁ ။ မောင်ကျော်ဇင်ဦး နှင့် မဝင့်ကြည်ဖြူ ၅-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 30
၄၁၀ ။ ကိုဝင်းဗိုလ်+မပြုံးပြုံးျနွယ် မိသားစု ၅-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 150
၄၀၉ ။ မလဲ့လဲ့ဝင်းအောင် ၅-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 100
၄၀၈ ။ ဒေါက်တာခင်မောင်ထွန်း + မနော်သန်းချို မိသားစု (အင်္ဂလန်) ၃-၁၂-၂၀၁၂ ပေါင်စတာလင် 300
၄၀၇ ။ ကိုမောင်မောင်အေးချမ်း + မမာလာမျိုး မိသားစု
(Dhammdownload NAS storage အတွက် လစဉ်) ၃-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 25
၄၀၆ ။ ကိုနန္ဒဇော် ၁၆-၁၁-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၈.၈၂
၄၀၅ ။ ကိုမင်းနိုင်ဦး ၂-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 20
၄၀၄ ။ ကိုသီဟဇော် + မဉ္ဇရီ မိသားစု (လစဉ် အလှုငွေ) ၂-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၀၃ ။ ချိုနွယ်စုလှိုင် (လစဉ် အလှုငွေ) ၁-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၀၂ ။ သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ အထူးတရားစခန်းဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ၁-၁၂-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 200
၄၀၁ ။ မမြတ်နန္ဒာမိုး (လစဉ် အလှုငွေ) ၃၀-၁၁-၂၀၁၂ စင်ကာပူဒေါ်လာ 10
၄၀၀ ။ မစုလှိုင်